Kutaan kun, ilaalcha gubbaa kan kamshaa Barreessaa LibreOffice keessa jiran laata.Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.
Kabalii dhangeessuu, dalagawwan dhangeessaa barruu hedduu of keessaa qaba.
Kabalii Fakkaattii, dalagawwan saxaatoo suurxiqqoo filatame dhangeessuu fi qubachiisuudhaaf garagaran of keessaa qaba.
Yammuu goodayyaan filatamuu, Kabalii Goodayyaa dalagaawwan goodayyicha dhangeessuu fi qubachiisuuf baay'ee barbaachissaa tahan siif laata.
Kabalii OLE-Object kan mul'atan, yammuu wantawwanii filatamaniidha, akkasuumas dalagawwan wantawwan dhangeessuu fi qubachiisuudhaaf gargaran baay'ee of keessaa qabu.
Kabala Amalootaa Wanta Fakkasaa
Kabala Rasaasawwan fi Lakkaawwii
Kabalii Rasaasawwan fi Lakkaawwii dalagaalee caasaa kan keewwatawwan lakkoofsifamanii, tartiiba keewwatawwanii, fi sadarkaalee keewwataa adda addaa qindeessuu dabalatee, fooyyessuudhaaf garagaran of keessaa qabu.
Kabalii Haalojii, odeeffannoo waa'ee galmee ammaa fi qabduuwwan fooyii dalagawwan addaa waliin dhiyeessuu of keessaa qaba.
Kabala Deetaa Gabatee
Mul'annoo deetichaa too'achuuf, Kabala Deetaa Gabatichaa fayyadami.
Sarartuuwwanii, gara fuulaa, qubannoo caancalawwanii, galumsawwan, handaaraalee, fi tarjaawwan agarsiissu. Hantuttee dayyadamuun sarartuu irratti hunda kana fooyyessuu nidandeessa.
Kabalii Formula, akka ati galmee barruu keessatti herregawwan uumtuu fi saagduu siif hayyama. Kabala Foormulaa kakaasuuf, F2 dhiibi.
Kamshaan goodayyaawwan, saxaatoo, gabateewwan, akkasuumas wantawwan kabiroo saaguudhaaf, faankishinii hedduu of keessaa qaba.